Dilaa Halis ah oo lagu qabtay Magaalada Tokyo ee dalka Japan(SAWIRRO) – Xeernews24
Dilaa Halis ah oo lagu qabtay Magaalada Tokyo ee dalka Japan(SAWIRRO)
Booliska dalka Japan, ayaa maanta xabsiga u taxaabay nin dhalinyaro ahaa, ka dib markii hoyga uu ka degan yahay Magaalada Tokyo laga helay sagaal meyd ah, oo go’go’an.
Takahiro Shiraishi oo 27 jir ah, ayaa qaboojiye uu guriga dhigtay lagu arkay laba madax oo bani’aadam ah. Sarkaal Booliska Tokyo u hadlay, ayaana sheegay in ninkaasi uu madaxyada ku haystay sanduuq qaboojiye leh.
SarkaalKan, ayaa sheegay in Takahiro Shiraishi uu u muuqdo dilaa halis ah, balse ay wax kaste kala caddaan doonaan, kolka ay soo afjaraan baadhitaanka ay Talaadada maanta bilaabeen.
Warbaahinta Japan, ayaa qoreysa in ninkani soo qabashadiisa ay ka dambeysay, ka dib markii uu ku lug yeeshay gabadh dhalinyaro ahayd oo toddobaadkii hore la waayay.
Dhacdadan, ayaa dareen argagax leh ku dhalisay bulshada reer Japan, iyadoona ay si weyn u hadalhayan. Dadka reer Japan, ayaa waxay dhacdadani ku faaqidayan barraha bulshada.
Sidoo kale dadkii deriska la ahaa, ayay fillan-waa ku noqotay fal dembiyeedka culus ee Takahiro Shiraishi lagu soo xidhay, waxa ayna su’aal ka keenayn ninka halistaasi leh waxa darbi wadaag ka dhigay.
Japanese-ka, ayaa si dhow ula socon doono warbaahinta, illaa iyo inta ay boolisku ka soo bandhigayan natiijada baadhitaanka, ay ku mashquulsan yihiin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/Tokyo4.jpg 444 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-31 23:12:412017-10-31 23:12:41Dilaa Halis ah oo lagu qabtay Magaalada Tokyo ee dalka Japan(SAWIRRO)
Turkiga oo Hub Casri ah ugu deeqay ciidamada xoogga Dalka Somalia (Akhriso) Maxaa ka Jira in BioInjineer Mahad Abiib iska dhibay Dalka Island?